China Polyethylene Glycol 6000 Peg6000 ifektri abakhiqizi | Yinuoxin
I-Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
I-Polyethylene glycol 6000 ilungiswa yi-polymerization ye-liquid ethylene glycol emazingeni aphezulu okushisa, umfutho ophakeme noma umfutho ophansi.
I-Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Igama lesiNgisi: macrogol 6000-992 lo mkhiqizo uyingxube ye-ethylene oxide namanzi polycondensation, ifomula yamangqamuzana i-ho (CH2CH2O) NH, lapho i-n imelela inani elijwayelekile lama-oxyvinyls.
Lo mkhiqizo uyi-flake emhlophe e-waxy solid noma i-powder eyimbudumbudu, enukayo kancane. Umkhiqizo uyancibilika emanzini noma e-ethanol, kepha awungenakunyibilika ku-ether. Indawo eqandayo yalo mkhiqizo (Isithasiselo VI d) ingama-53 ~ 58 ℃. I-viscosity ithatha u-25.0g walo mkhiqizo, uwufake ebhodleleni lokulinganisa elingu-100ml, engeza amanzi ukuze ancibilike futhi ancibilikise esikalini, unyakazise kahle, usebenzise i-viscometer yePinker enobubanzi obungaphakathi buka-1.0mm ukunquma ngokomthetho (Isithasiselo VI g indlela 1 ). I-viscosity ye-kinematic ku-40 ℃ ingu-10.5-16.5mm <2> / s.
Inokucasuka okuncane esikhunjeni nasemehlweni, futhi kunzima ukumunca umgudu wamathumbu ngemuva kokuphathwa ngomlomo, futhi ubuthi buphansi kakhulu. Ukujovwa kwesixazululo esino-5% (mass) esiqukethe i-polyethylene oxide emehlweni onogwaja kubangele ukusha okuncane kuphela. I-PEO ibe nomthelela omncane ezingeni lokufa kwezinhlanzi, inkalankala, i-Anemone, imfanzi noma ulwelwe. I-resin nesixazululo sayo samanzi anobuthi obuncane, futhi kuphephile ukusetshenziswa nokuphathwa. I-US Food and Drug Administration (i-FDA) ivume ukusetshenziswa kwe-polyethylene oxide solutionqueque resin yokupakisha ukudla okukhethekile nezithasiselo eziqondile zebhiya.
Isisindo esimaphakathi samangqamuzana salo mkhiqizo cishe singu-12.5g, esikalwa ngokunembile. Yifake ebhodleleni eliyindilinga elingu-250ml ngesivalo, engeza i-25ml pyridine, ifudumeze ukuze uyiqede, bese uyipholisa. Ngokwendlela ye-polyethylene glycol 400, eqala kusuka ku- “pyridine solution added with phthalic anhydride ngokunembile”, isilinganiso samangqamuzana kufanele sibe ngu-5400-7800. I-asidi, ukucaciseleka nombala wesixazululo, kanye nensalela ekushiseni kufanele kuhlolwe ngokwendlela echazwe ku-polyethylene glycol 400.
Langaphambilini I-Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Olandelayo: I-Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000
Isikhunta Yijie R-99 Yangaphakathi lengetiwe Isikhunta Khipha ...